induction yekupfeka kubviswa kwekubvisa pendi neyakagadziriswa kupisa system
Induction kuputira kubviswa chirevo
Iyo induction disbonder inoshanda nemisimboti yeiyo induction. Kuchenesa kunogadzirwa musimbi substrate uye kubatana kwakaputsika. Iko kupfeka kunobva kwabviswa zvachose pasina kuparara uye kusununguka zvachose kubva kune zvinosvibisa vamiririri, kureva blast media.Izvi zviri pachena zvinoita kuti kuraswa uye kudzokororazve marara kuve nyore uye kwakachipa. Kunyangwe mukati memapittings uye makatsemuka ari pamusoro pekupfekedzwa kunodzingwa.
Iyo HLQ Induction kudziya inoshanda nekukurumidza kuchinjisa kwesimba kune iyo simbi substrate, semhedzisiro kuchengetedza inodzorwa kudziya kwepamusoro uye nekukurumidza kubviswa kwemazhinji marudzi ejasi.
Chii chinonzi induction kupfeka kubviswa?
Iyo HLQ Induction kuputira kubvisa system inyika-ye-iyo-iyo-induction yekupisa chishandiso iyo inokurumidza kubvisa pendi uye yakaoma, yepamusoro-kuvaka machira. Iyo inokurumidza, yakachena uye yakachengeteka nzira yekubvisa mipendero.
Induction Kutya inogona kukunda nzira dzechinyakare dzekupenda-pendi. Hasha nyunje kana dhisiki kukuya kunowanzo kuve kwakanyanya kushanda kwakanyanya uye kunouya nedzimwe nyaya dzakadai semutengo weyakavharirwa kana kudzikisira uye kuunganidzwa kwekufema midhiya, pamwe nekusefa kana kupatsanura kweanopfeka zvinhu zvekurasa. Mumazhinji mapurojekiti emumaguta izvi zvakakosha uye zvinodhura zvakanyanya kukunda. Ipo, kana machira achibviswa neyakaiswa, iyo chete marara ndiko kupfekedza pachako uko kazhinji kunogona kutsvairwa kana kutocheneswa senge chero imwe tsvina yemusangano.
Yakachengeteka kushanda mhepo mvura nenzvimbo: Iyo inodzorwa, yemunyika kupisa inoguma yakanyanya kuderedzwa hutsi uye ine chepfu guruva.
nyore Tsvaira: Iyo yekunamira zvinhu zvinonyanya kudzima mumaflakes pane kupururwa.
Hapana ruzha mashandiro: Vashandisi vanogona kushanda munzvimbo dzeruzhinji pasina kugadzira nyonganiso.
famba: Iyo midziyo ine makobvu uye yakavimbika asi ichiri yakareruka-huremu uye yakapusa kufamba-famba pamabasa.
Yakaderedza simba kunwa: Inokurumidza, yakarurama uye inodzokororwa kupisa dhiriini inoita kuti kubviswa kwekupfeka kuve nesimba rakanyanyisa.
Maitiro ekuchinjika: Spot kupisa, kuongorora, freehand uye semi-otomatiki.
Hapana zvinogumira: Iyo sisitimu inogona kushandiswa panzvimbo dzakapetana, yakatenderera contours, mukati / kunze kwemakona, mativi ese eiyo substrate, akakomberedza rivets, nezvimwe.
Induction kuputira kubviswa kunoshandiswa mumaindasitiri mazhinji, senge ngarava / marine, zvivakwa, matangi ekuchengetera, mapaipi, mabhiriji uye kumahombekombe.
induction Heating inosanganisira kushandisa kuchinjanisa zvazvino uye induction coil kuburitsa ine simba electro-magnetic munda. Kana uchinge washandiswa nemazvo, munda uyu unogadzira kupisa pazasi pekupfeka pane substrate yesimbi, zvichikonzera kupfekedzwa kwekusunganidzwa nekukurumidza uye nyore kubva pasimbi pamusoro.
KuAlliance, tinoshandisa maitiro aya kubvisa machira kubva kusimbi senge:
Kupfeka kwakawanda kunosanganisira epoxies, urethanes nevamwe
Kupfeka moto-kunonoka (PFPs)
Glued uye yakavhenekerwa rabha pamwe neklorini rabha
Induction Kuputira Kubvisa Pamatangi Ekuchengetedza -
The Induction Heating System Yekubvisa machira inokodzera kwazvo kumhanya nekukurumidza kubvisa kwakakura nzvimbo kana kuongorora masefa ematare mumatangi ekuchengetera. Zvakaitika kubva kubasa kumatangi emvura zvakaratidza kuti gobvu regirazi-faibha (5-6 mm) inogona kubviswa nemitero yekubvisa inosvika ku 10-12 m2 / hr. nepo dzakaonda zvechivanhu kupenda masisitimu anogona kubviswa mumitengo inosvika 35 m2 / hr.
Kwete chete iyo iyo Induction system inoburitsa yakakura hupfumi mabhenefiti senge yakakwira kubvisa mitero uye kushoma kurasa marara, asi zvakare inogonesa zvakatipoteredza - uye anoshanda anoshanda mashandiro.
Induction Kuchenesa Kubvisa Pamapaipi -
Iyo patent HLQ Induction Heating System yekubvisa machira yakaratidza kuve inoshanda kwazvo pamapombi uye inorarama mapaipi mapurojekiti kutenderera pasirese. Iyo inobudirira uye zvakachengeteka inobvisa kupfeka kwakadai seMalahle Tar, Ebonite, 3LPE / 3LPP, rabha uye mamwe akaomarara linings neukobvu kusvika pamamirimita makumi matatu.
Zvipfeko kubviswa ne HLQ Technologies zvinodhura uye hazvigadzi giriti yakawedzera kana tsvina yemvura, zvichipa mukana mukuru wekuchengetedza mukugadzirisa zvinhu, kunyanya munzvimbo dziri kure. Zvipfeko zvinobviswa nyore nyore muzvidimbu kana zvidimbu izvo zviri nyore kuisa mumarara mabhegi e kurasa pasina njodzi yekusvibiswa nemhepo, pasi kana mvura.
Kushanda chinhambwe kubva kuchikamu chikuru kunosvika pa100m iyo inobvumidza inochinja uye inoshanda mashandiro. HLQ yakagadzira mhinduro yepamutemo inobvisa njodzi yekupisa pamusoro kana uchishandisa iyo induction system pane simbi. Ichi chave chinhu chinodiwa mukugadzirisa kubudirira kupihwa mvumo yekushandisa pamafuta epombi- uye mapaipi egasi.
Categories 未 分类 Tags unhani kubvisa, kuputira kubvisa induction, kuvhara kubviswa paipiipi, kuputira kubviswa pane simbi, kuputira kubviswa pamatangi, induction yekupisa kupisa, kuburitsa kupfeka kubviswa, induction yekumhanyisa kubvisa system, kubviswa kwepende kubviswa, induction pende yekubvisa hita, kubvisa pendi Post navigation
induction inopisa inogadzira uye yekugadzira maitiro